Shirka Soomaalida London halkuu maraayaa ? – idalenews.com
Shirka Soomaalida London halkuu maraayaa ?
Waxaa Weli Bilow maraaya Shirka Soomaalida loogu qabtay Maggaalladda London ee Cariga Britain, iyadoona halkaasi ay Kalimaddo kala duwan ka jeedinaayaan Madaxda ka soo qeybgashay Shirka.
Waxaa Horaantii shirka Kalimaddo ku furay Ra’isul wasaaraha Dalka Britain David Camiron, oo isagu sabab u ahaa dhicitaanka Shirka.
David Camiron, waxa uu Bilowga shirka ka hadlay Arimaha guud ee Siyaasadda, Dhaqaalaha, Ammaanka Maggaaladda Muqdisho, waxa uu si barer cad Furitaanlka shirka uga sheegay in Dowladda Somalia ay baahi baaxad weyn u qabto in garab laga siiyo dhanka Siyaasadad, Ammaanka iyo Horumarinta dalka Somalia, wuxuuna sheegay in lagu jiro xilliga ay Caalamka garabsiin lahaayen Dowladda Md. Xassan Sheikh Maxamuud.
David waxa uu si dhiirinaan ku jirto ugu wargaliyay Madaxda ka kala socta Caalamka in Somalia ay u talaabsaneyso Waji hor leh oo ka duwan wajigii looga bartay Somalia, balse maaro loo la’yahay waxa uu ugu yeeray Burcad badeeda Somalia, hayeeshee in xal loo helay wax yaabaha kale ee Somalia ugu muhiimsan sida Horumarka, Ammaanka.
Waxaa Xigay Khudbadii Madaxweyaha Jamhuuriyadda Somalia Md. Xassan Sheikh Maxamuud, waxa uuna si guud uga hadlay Arrimaha Somalia Sida:- Ammaanka, Horumarka, Dhaqaalaha iyo Burcad badeeda Somalida eek u baahday Xeebaha Caalamka, isla markaana dhibaato u geystaan Maraakiibta Caalamka.
Madaxweyne Xassan waxa uu Khudbadiisa inta badan xooga ku saaray Arrimaha la xiriira Ammaanka iyo Bulshadda oo uu Xassan Sheikh Sheegay inay tahay mid dhanka Shacbiga iyo Dowladiisa muhiim u ah, wuxuuna sheegay garabsiinta Xukuumadiisu inay tahay mid dan u ah Dowladaha dariska la ah Somalia.
Wuxuu sharaxaad buuxda ka bixiyay kaalinta Dowladda uga aadan dhismaha Maamul u sameeynta Goboladda Dalka Somalia, isagoona mahad Ballaaran usoo jeediyay Dowladda Kenya, Uganda, iyo Ethiopia oo uu ku sheegay inay yihiin kuwa wax badan ka qabtay Xaaladda dalka Somalia uu soo maray iyo tan ay hadda ka soo gudubtay.
Madaxweyne Xassan weli ma uusan jeedi Khudbadii ugu weyneyd balse waxa uu hadda jeediyay Khudbo Horudhac ah oo uu ku iftiiminaaya Siyaasadaha ay ku talaabsatay Dowladiisu.
Waxaa xigay Khudbaddii Ra’isul wasaaraha Dowladda Ethiopia Haile Mariam Desailegn, waxa uu ka hadlay Kaalinta Dowladda Ethiopia kaga aadan Xal u helida Somalia iyo Xeriirka kala dhexeeya Soamlaia, waxa uu Haile Mariam Desailegn, si kooban uga hadlay Dowladda Somalia oo ay ka joogaan Ciiddamo Ammaan, wuxuu sheegay inay ku hami qabaan sidii Somalia ay ugu istaagi laheyd Cagaheeda isla markaana ay Dowladiisu kaalin buuxda ka qaadan doonto Dhismaha, Ammaanka, Dhaqaalaha.
Wuxuu sheegay inay Madaxda Dowladda Somalia kawada hadleen sidii xal loogu heli lahaa Somalia, isla markaana Dowladda Ethiopia ay muujin doonto Kaalinteeda, Haile Mariam Desailegn, waxa uu si guud uga hadlay Siyaasadda ay ka damacsan yihiin Somalia isagoona sheegay in Dowladda Ethiopia ay il gaar ah ku eegeyso xalinta Somalia.
Haile Mariam Desailegn, ma uusan ku dheeran Khudbadiisa, waxa ayna ahayd Khudbadiisa mid horudhac ah, balse waa uu ku soo laaban doona mar labaad Khudbadiisa.
* Waxaa xigay Khudbo Horu dhac ahayd oo uu jeediyay Madaxweynaha Dowladda Uganda Yuweri Musafeni, oo isaguna si hour dhac ah uga hadlay kaalinta Dowladiisu ku leedahay Somalia, waxa uu sheegay in Somalia ay ka joogaan Ciiddamo badan taasina ay tahay mid sabab u ah sidii loo heli lahaa xal waarta oo ay ku harsadaan Shacbiga soomaaliyeed.
Yuweri Musafeni, waxa uu si hour dhac ah uga hadlay in Dowladda Uganda ay dhiig iyo dhaqaalaba ku bixisay sidii loo gaari lahaa xal u helida Somalia.
Wuxuu si cad u sheegay in Dowladda Uganda ay xoojin doonto xiriirka kala dhexeeya Somalia iyadoona muujin doonta kalsooni buuxda.
Yuweri Musafeni, weli kama uusan wada hadlin Siyaasadda Uganda iyo Somalia ka dhexeeya, balse waxa uu isaga iyo madaxdii ka horeysayba ka hadleen Khudbooyin Horu dhac ah.
NB. Fiira gaar ah:- Waxaa weli socda Shirka, waxaana Khudbooyin hour dhac ka halkaasi ka jeediyay ku dhawaad Afar Mudanayaal oo ka kala socday Dowladaha dariska la ah Somalia.
Madaxda waxa ay iminka hakiyeen Shirkooda, waxaa leysu soo laaban doono qadada kadib, iyadoona si toos ah loo aadi doono Wasaaradad Arrimaha Dibadda oo la filaayo inay baahiso Qodobo hour dhac ah oo shirka ka soo baxay, iyadoona maalinta bari ah la qaban doono Shir dhaqaale loogu aruurin doono Dowladda Somalia.
– Lasoco wixii ku soo kordha isu soo laabashadda Shirka London.